घनश्याम भुसालले ओलीलाई सोधेः कसका लागि पार्टी फुटाउँदै हुनुहुन्छ ? « Drishti News – Nepalese News Portal
घनश्याम भुसालले ओलीलाई सोधेः कसका लागि पार्टी फुटाउँदै हुनुहुन्छ ?
१७ चैत्र २०७७, मंगलबार 12:45 pm
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता धनश्याम भुसालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी फुटाउन उद्दत रहेको बताएका छन् । पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै भुसालले पार्टी अध्यक्षकै कारण पार्टी फुट्न लागेको उल्लेख गरेको छन् ।
स्पष्टीकरण जवाफमार्फत भुसालले अध्यक्ष ओलीलाई कसका बलमा, कसका लागि यो पार्टी विभाजन गर्दै हुनुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । नेता भुसालले ओलीलाई व्यक्तिवादको घोर नशाबाट ब्युँझन समेत आग्रह गरेका छन् ।
पत्रमार्फत भुसालले अध्यक्ष ओलीलाई सत्ता र शक्तिको भोगको हिसाबले तपाईँले पाउन अझै के बाँकी छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले ओलीलाई भनेका छन्– ‘पार्टीलाई बन्धक बनाएर तपाईले ती सबै पूरा गर्नु भयो । त्यहि अनुपातमा तपाईँले पार्टीको विचार, आदर्श, सामूहिकता, सामाजिकताजस्ता धरोहरहरु भत्काउँदै जानु भयो ।’
नेता भुसालले लेखेको स्पष्टीकरण जवाफको पूर्णपाठ–